DEG DEG:- Wafdi uu horkacaayo madaxweyne Farmaajo oo goor-dhaw ka dhoofay Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wafdi uu horkacaayo madaxweyne Farmaajo oo goor-dhaw ka dhoofay Muqdisho
Wafdi uu horkacaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa goor-dhow ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyagoona kusii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa markii uu gaaro magaalada Addis Ababa inuu halkaasi kulamo kula qaato ra’iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Hailemariam Desalegn, kuwaas oo kawada hadli doonna xaaladda Soomaaliya, doorka Itoobiya ay ku leedahay Soomaaliya iyo shirka London ka furman doonno.
Safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Addis Ababa ayaa kusoo beegmaya kahor inta aanu dhicin shirka dhawaan ka furmaya magaalada London ee looga hadli doonno arrimaha Soomaaliya, wuxuuna safarkiisan ee Itoobiya noqonayaa mid taariikhi ah uu ku tago dalkaas.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa inta aanu ka dhoofin magaalada Muqdisho waxa uu booqasho ku tagay mid ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaalla magaalada Muqdisho, wuxuuna halkaasi kusoo indho-indheayay xaaladda dadka barakacayaasha ah ee xeradaasi ku sugan.
Waa markii ugu horeeysay uu madaxweyne Farmaajo booqasho ku tago dalkaasi Itoobiya, tan iyo markii xilka loo doortay, waana safarkii labaad uu booqasho ku tago dalalka deriska la ah Soomaaliya.